ရထားခရီးသွားဗြိတိန်မော်ကွန်းတိုက် | တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ယနေ့ခေတ် ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွင် အခိုင်မာဆုံး ခေတ်ရေစီးကြောင်း ရပ်တည်သူများမှာ အနှစ်တစ်ထောင်များ ဖြစ်သည်။. This generation focuses on the most unique experiences in off-the-beaten-path destinations with impressive Instagram accounts. အဆိုပါ 12 millennial travel destinations worldwide feature the most popular IG of young travel bloggers. ရထားပို့ဆောင်ရေး ဆိုသည်မှာ…
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ...
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ရှေးခေတ် ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ကျောက်တွေ ရှိရင် ပြောတတ်တယ်။, ရှေးခေတ်ယဉ်ကျေးမှုတွေအကြောင်း ပြောကြမယ်။, ကျူးကျော်မှုများ, ယဉ်ကျေးမှုများ, အချစ်. အဆိုပါ 12 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်း အများစုသည် အလှအပနှင့် ရုပ်ထုများကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။. အီဂျစ်ရှိ ဖာရောဘုရင်၏ ဘုရားကျောင်းများမှ အရှေ့တောင် အာရှရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းများအထိ, ဤ…